Makambani akanakisa ekuvandudza mutambo: Feral Inopindirana | Linux Vakapindwa muropa
Zvekare zvakare, isu tinoenderera mberi nerunyorwa rwevakakunda muvhoti yevaverengi veiyo yakasarudzika portal Kutamba kuri Linux. Ndiregererei nekuomerera, ndingade chaizvo gore rinouya kuti ndikwanise kuongorora yedu yega runyorwa rwevakakunda. Nezve izvo, ini ndinokukoka iwe kuti ushandise iyo fomu fomu kuti utiudze nezve ako zviitiko achitamba paLinux.
Ipapo isu tinotanga nerondedzero yevagadziri vemitambo yeLinux
1 Makambani akanakisa ekuvandudza mutambo ane shanduro dzeLinux muna 2019
1.1 Feral Inopindirana (anokunda)
1.1.1 Iyi kambani yakazvarwa muna1996 ichigadzira mitambo yeMac, gare gare yakaisa mitambo yemafoni nhare uye munguva pfupi yapfuura yeLinux. Mamwe mazita emazita esarudzo yatinosarudza ndeaya:
1.1.2 Medieval II: Yakazara Hondo ™ Unganidzo
1.1.3 Yakazara Hondo: MATATU UMAMBO
1.1.4 A Yakazara Hondo Saga: Zvigaro zveBritain
1.1.5 Hupenyu Husinganzwisisike
1.1.6 Kambani yemaHero 2: Hondo yeBritish
1.1.7 Alien: Kusurukirwa
Makambani akanakisa ekuvandudza mutambo ane shanduro dzeLinux muna 2019
Feral Inopindirana (anokunda)
Iyi kambani akaberekwa muna 1996 kugadzira mitambo yeMac, yakazobatanidzwa mitambo yemafoni nhare uye munguva pfupi yapfuura yeLelux. Mamwe mazita emazita esarudzo yatinosarudza ndeaya:
Medieval II: Yakazara Hondo ™ Unganidzo
Mutambo zano uye hondo zvakaiswa muMiddle Ages
Sa mambo murwi unofanira kuwedzera nzvimbo yako yesimba uye ubatanidze simba rako nemusanganiswa wezvematongerwo enyika, wezvekutengeserana nehondo. Iwe unofanirwa kuvaka zvivakwa zveumambo hwako, maguta, uye nzira dzekutengesa, wobva waziva hunyanzvi hwekudyidzana kuti ubvise vavengi, kupa simba kune vanobatana, uye kuhwina nyasha naPapa. Panhandare yehondo, uchafanirwa kuita kurwa kwekukomba uye kutungamira mauto ako mukukakavara kukuru
Yakazara Hondo: MATATU UMAMBO
Nhoroondo inoitika panguva yekukakavadzana kwemukati muChina chekare.
Tiri muna 190 AD China inyika huru, asi yakatsemurwa nehondo dzevagari vemo. Vanhu vanoda hutungamiriri hutsva kuvabatanidza. Ino ndiyo nguva yekutora masimba, kuumba inotevera huru imba, uye kuvaka nhaka ichagara kuburikidza nemazera.
Tichakwanisa kusarudza gumi nembiri varwi vehondo, kutora vatungamiriri uye kukunda vatinokwikwidzana navo pamativi mana: emauto, tekinoroji, ezvematongerwo enyika nehupfumi.
A Yakazara Hondo Saga: Zvigaro zveBritain
Mune ino kesi, hunyanzvi hwako uye hunyanzvi hwekurwa hunoendeswa kuchitsuwa cheGreat Britain.
Muna 878 AD, Mambo weChirungu Alfred Mukuru akakwanisa kumisa kupinda kweViking. Zvisinei, vatongi vehondo veNordic vakagara muBritain yose. Kwenguva yekutanga mumakore angangoita makumi masere, nyika iri murunyararo rugare.
Mushure mekusarudza rimwe remativi gumi, uchafanirwa kuvaka nekuchengetedza humambo kubva kuAnglo-Saxons, madzinza eGaelic, marudzi eWelsh kana Viking vanogara. Ita mibatanidzwa, gadzirisa misha, simudza mauto, uye ita mishandirapamwe yekukunda pamepu.
Iyo protagonist ye nyaya iyi ndiMax Caulfield, mudzidzi wepamusoro wekutora mifananidzo anoona kuti anogona kudzosera nguva nekuchengetedza shamwari yake yepamoyo Chloe Mutengo.
Vaviri vacho vanofanirwa kuongorora kushamisa kusinganzwisisike kwemumwe wavanodzidza naye Rachel Amber, ukuwo Max achiziva kuti kushandura zvakapfuura dzimwe nguva kunogona kutungamira kune ramangwana rinoparadza.
Kambani yemaHero 2: Hondo yeBritish
Mutambo yakaiswa muWWII
Iwe uchafanirwa kutungamira mauto ako kuburikidza nekumhanya-mhanya, chaiwo-nguva ehondo muhondo ine hutsinye kutendeuka mafungu ehondo. Iwe uchafanirwa kurwa nemuvengi wako uye nemamiriro ekunze mune akateedzana ehondo kubva kubva mukupererwa kwekudzivirira kweStalingrad kusvika mukukunda kwekupedzisira muBerlin.
Mutambo uyu unoumbwa nechinangwa-chakavakirwa mamishinari izvo zvinoda kuti iwe utungamire varwi, pfuti, uye matangi munzvimbo dzine hupfumi kuti usvike kunhandare yehondo, zvinangwa zvakachengeteka, nekuparadza vavengi.
Rimwe zita nemutungamiri wechikadzi.
Amanda Ripley akapedzisira kuona amai vake zuva raakavimbisa kuti achange ave pamba rake rekuzvarwa kwegumi nerimwe. Zvisinei, haana kuzomuonazve mushure mezuva raakasiya nzvimbo.
Makumi gumi nemashanu gare gare, Amanda anonzwa kuti rekodhi yaamai vake yendege, iyo Nostromo, yakawanikwa kunzvimbo iri kure yekutengesa Sevastopol. Paanosvika muSevastopol, iye anoziva kuti chimwe chinhu chakanyanya kushata; chiteshi ichi chiri kutyisidzirwa nenjodzi inouraya, kuteedzera nekuuraya mumimvuri.
Kuti awane chokwadi nezvaamai vake, Amanda anomanikidzwa kusangana nechinhu chakaipisisa chakavaparadzanisa..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Akanakisa Linux Game Vagadziri: Feral Inopindirana
IUS inotendera bhiri rinorambidza kutengwa kwemidziyo yeHuawei